Kianin-dry zareo Senegaly Ny Fahafahana Vonjimaika Nomena An'i Béthio Thioune	Voadika ny 25 Febroary 2013 3:19 GMT
Zarao: Nahazo fahafahana vonjimaika ilay mpampianatra Korany Masina Cheikh Béthio Thioune, voasambotra ny ampitson'ny namonoany anankiroa tamin'ireo mpianany tao Médinatoul Salam, andro vitsy monja taorian'ny nadefasana azy hitsabo tena tany Frantsa.Ity fanapahan-kevitry ny fitsarana ity niteraka fanehoankevitra mivaivay teny anivon'ireo teratany Senegaly izay mihevitra fa niraviravy tànana tamin'ity raharaha ity ny fitsarana.
Zava-tsy misy dikany. Tsy misy andrasana amin'io fitondràna mpamitaka sy mpihatsaravelatsihy io ! Efa be no nolalovantsika tamin'ireo mpandala ny fidehadehafana ireo. Saingy hadisoana kely tsy misy lanjany no tehatehafantsika, ka dia izay rehetra hetsiky ny ‘mackysphère’ dia nandeha nifanohitra amin'ny lalàna daholo sy/na ny maoraly, ary indrindra indrindra fa ny tombontsoan'ny vahoaka. Ny sisa azontsika atao dia ny manangana rindrina fitomaniana manerana ny firenena, mba mety hampitony angamba izay. Tsy maintsy ampahatsiahivina fa ilay mpampianatra Korany masina Cheikh Béthio Thioune, mpitari-dàlana ny Thiantacounes, dia nosamborina sy naiditra am-ponja taorian'ny famonoana ny roa tamin'ireo mpanaraka ny fampianarany Ababacar Diagne sy Bara Sow, nalevina tsy nahazoana alàlana.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraMamadou Cherif Faye
FivavahanaLalànaMediam-bahoakaZavakanto & Kolontsaina